Who were Bengali, so called Rohingya?: ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်း
မီဒီယာ အခန်းကဏ္ဍကို တိုင်းပြည်ရဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ် မှတ်ယူကြပါတယ်။ မီဒီယာသမားတွေဟာ ဘက်လိုက်မှု အနည်းနဲ့အများ ရှိကြတယ်ဆိုတာကို လက်ခံတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် လက်ယာယိမ်း မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Fox News နဲ့ လယ်ဝဲမီဒီယာ ဖြစ်တဲ့ MSNBCတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို နားထောင်ရင် သတိနဲ့ ချင့်ချိန်နားထောင်ရတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးကို နားထောင်တာဟာ တစ်ဘက်တည်းကို နားထောင်တာထက် ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀မရှိတော့ နှစ်ဘက်အမြင်ကို သေသေချာချာ ကြားနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာ ပြည်ပအတိုက်အခံ မီဒီယာတွေကို ပုံအောပြီး အားပေးကြပါတယ်။ ပြည်ပအတိုက်အခံတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ အများစုရဲ့ ပြတင်းပေါက်ကြီးလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီသတင်းဌာနမှာ လုပ်နေတဲ့လူတွေဟာ အရမ်းတာဝန်ကြီးတယ်။ ဘက်လိုက်မှုမရှိတဲ့ သတင်းအမှန်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ တင်ပြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ တံခါးပိတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်းကို တင်ပြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာလည်း ဂဃဏန လေ့လာဖို့၊ အချက်အလက်တွေ သေချာ စုဆောင်းဖို့၊ အထူးသတိပြု တင်ပြဖို့ လိုအပ်တယ်။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 4:24 PM
I totally agree with the post! Those people are dangerous to our society. We must drive away them. We must!!! People please show our strength! We are not stupid enough. We don't want rohingyas.